ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ရင်း ထိုင်နိုင်တဲ့ဆိုင်လေးများ - ဒိုးမယျ
ခုခတျေမှာ ဆိုရှယျမီဒီယာတှအေသုံးမြားလာတာနဲ့အတူ လူတျောတျောမြားမြားက ကိုယျ့ရဲ့ နစေ့ဉျဘဝမှည ဖွဈပကျြနတောတှကေို ဆိုရှယျမီဒီယာမှာ အမြားသိအောငျ ပုံတငျတာပဲဖွဈဖွဈ ဗီဒီယိုလေးတှေ တငျတာပဲဖွဈဖွဈ လုပျကွတာက တျောတျောလေးခတျေစားလာပါတယျ။ စာရေးသူကလညျး ဒီတဈခါမှာ ပုံတငျဖို့ပုံလှလှလေးတှရေိုကျရငျး အစားအသောကျကောငျးကောငျးလေးတှရေတဲ့ ဆိုငျအပွငျအဆငျတျောတျောလှတဲ့ဆိုငျလေးတှကေို ဖျောပွပေးသှားမှာပါ။ ပရိသတျကွီးအတှကျ ရိုးရိုးစားသောကျဆိုငျ အပွငျ ဘားလေးတှပေါဖျောပွသှားမှာပါ။
၁. Bus Café’
ကနျတျောကွီးမြျောစငျကြှနျးအတှငျးမှာရှိပါတယျ။ ကားကွီးကိုနောကျခံထားပွီးရိုကျလို့ရသလို အတှငျးရဲ့ ခတျေနောကျပွနျဆှဲထားတဲ့ အပွငျအဆငျနဲ့ ကျောဖီလေးတဈခှကျက ပရိသတျကွီးတို့ကို တဈမြိးခဈြစရာကောငျးနစေမှောပါ။
ရှဘေုံသာလမျးနဲ့ အနျောရထာလမျးဆုံရာ ထောငျ့နားလေးမှာရှိပွီးသိပျရှာစရာမလိုအောငျ ပနျးရောငျလေးတှနေဲ့ ပနျးရောငျကွိုးကွာလေးတှနေဲ့ အလှဆငျထားတာ့ဖွဈပါတယျ။ အထဲက ပနျးရောငျလေးတှကွေောငျ့ ပုံရိုကျလိုကျတိုငျး ပနျးရောငျလေးသမျးနပွေီး လှနစေမှောပါ။ ပရိသတျကွီးတို့အကွိုကျ Bubble Teaလညျးရတယျလေ။
၃. Gloria Jeans’
Australia နိုငျငံအခွစေိုကျဆိုငျလေးဖွဈပွီး အဒိကအားဖွငျ့ မွနျမာပလာဇာဘေးဘကျအခွမျးရှိ ဆိုငျခှဲဟာဆိုရငျ တခြိူ့လူငယျမြားရဲ့ နစေ့ဉျထိုငျနကေတြောငျဖွဈနပေါတယျ။ အငျးလြားကနျဘောငျကိုမွငျနရေတဲ့အပွငျ လကေောငျးလသေနျ့ရစပွေီး နဝေငျခြိနျမှာဆို ပုံလေးတှကေ အရမျးကိုအသကျဝငျလှပနပေါတယျ။
၄. Atlas Bar and Rooftop
ဒီနရောမှာကတော့ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ မွငျကှငျးကိုကောငျးကောငျးရပွီး တျောတျောလေးလညျး သောကျစရာတှကေကောငျးပါတယျ။ အောကျမှာရှိတဲ့ Mahlzeit ဂြာမနျစားသောကျဆိုငျကနပွေီး အစားအသောကျလေးတှလေညျးမှာစားလို့ရပါတယျ။ရနျကုနျမွို့ကွီးကို နောကျခံထားပွီးပုံရိုကျလိုကျရအောငျနျော။
၅. Mother’s House
ဖှငျ့တာသိပျမကွာသေးပါဖူး။ဒါပမေဲ့ ပုံစံသုံးမြိူးလောကျကို ခံစားရပွီးပုံလှလှလေးတှရေိုကျရငျး ဒီဆိုငျရဲ့ Steakလေးတှကေို မွညျးစမျးကွညျ့ပါ။ ပုံစံသုံးမြိူးလို့ဆိုလိုတာကတော့ အထပျသုံးထပျရှိပွီး မွညေီထပျမှာ တကယျ့ လမျးမဘေးက ဘားလေးတဈခုလို ခံစားရစမှောပါ။ ဒုတိယထပျမှာတော့ တကယျ့အထကျတနျးလှာခံစားမှုကို ရစမှောဖွဈပါတယျ။ အပျေါဆုံးထပျကတော့ တကယျ့ကို ကလပျထဲကိုရောကျသှားသလိုခံစားရစမှောပါ။ အဝတျအစား စတိုငျအစုံလေးတောငျ ထညျ့သှားသငျ့ပါတယျ။
၆. 90’s Bar
1900 ခုနှဈမြားမှာသာ သငျမှေးခဲ့ရငျ ဒီနရောမှာ သငျပြျောနမှောပါ။ ငယျဘဝကို အမှတျရစမေဲ့ အပွငျအဆငျတှအေပွငျ ဒီဆိုငျမှာဖှငျ့တဲ့ ဂီတတှကေသငျ့ကို ငယျဘဝထဲကို အရောကျဆှဲချေါမှာပါ။
စာရေးသူတဈဖကျသတျအမွငျတှဖွေဈနမှောစိုးလို့ပါနျော။ ခုလို အစားအသောကျနဲ့ ပတျသကျတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို ဖတျရှုခငျြတယျဆိုရငျတာ့ Doemal Page မှာရော Website မှာပါ အမွဲစောငျ့ကွညျ့ ဖတျရှုနိူငျပါပွီဆိုတာလေးလဲ ပွောပါရစေ။
ခုခေတ်မှာ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအသုံးများလာတာနဲ့အတူ လူတော်တော်များများက ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှည ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ အများသိအောင် ပုံတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဗီဒီယိုလေးတွေ တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ကြတာက တော်တော်လေးခေတ်စားလာပါတယ်။ စာရေးသူကလည်း ဒီတစ်ခါမှာ ပုံတင်ဖို့ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ရင်း အစားအသောက်ကောင်းကောင်းလေးတွေရတဲ့ ဆိုင်အပြင်အဆင်တော်တော်လှတဲ့ဆိုင်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ရိုးရိုးစားသောက်ဆိုင် အပြင် ဘားလေးတွေပါဖော်ပြသွားမှာပါ။
ကန်တော်ကြီးမျော်စင်ကျွန်းအတွင်းမှာရှိပါတယ်။ ကားကြီးကိုနောက်ခံထားပြီးရိုက်လို့ရသလို အတွင်းရဲ့ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲထားတဲ့ အပြင်အဆင်နဲ့ ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်က ပရိသတ်ကြီးတို့ကို တစ်မျိးချစ်စရာကောင်းနေစေမှာပါ။
ရွှေဘုံသာလမ်းနဲ့ အနော်ရထာလမ်းဆုံရာ ထောင့်နားလေးမှာရှိပြီးသိပ်ရှာစရာမလိုအောင် ပန်းရောင်လေးတွေနဲ့ ပန်းရောင်ကြိုးကြာလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတာ့ဖြစ်ပါတယ်။ အထဲက ပန်းရောင်လေးတွေကြောင့် ပုံရိုက်လိုက်တိုင်း ပန်းရောင်လေးသမ်းနေပြီး လှနေစေမှာပါ။ ပရိသတ်ကြီးတို့အကြိုက် Bubble Teaလည်းရတယ်လေ။
Australia နိုင်ငံအခြေစိုက်ဆိုင်လေးဖြစ်ပြီး အဒိကအားဖြင့် မြန်မာပလာဇာဘေးဘက်အခြမ်းရှိ ဆိုင်ခွဲဟာဆိုရင် တချိူ့လူငယ်များရဲ့ နေ့စဉ်ထိုင်နေကျတောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ အင်းလျားကန်ဘောင်ကိုမြင်နေရတဲ့အပြင် လေကောင်းလေသန့်ရစေပြီး နေဝင်ချိန်မှာဆို ပုံလေးတွေက အရမ်းကိုအသက်ဝင်လှပနေပါတယ်။
ဒီနေရာမှာကတော့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ မြင်ကွင်းကိုကောင်းကောင်းရပြီး တော်တော်လေးလည်း သောက်စရာတွေကကောင်းပါတယ်။ အောက်မှာရှိတဲ့ Mahlzeit ဂျာမန်စားသောက်ဆိုင်ကနေပြီး အစားအသောက်လေးတွေလည်းမှာစားလို့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို နောက်ခံထားပြီးပုံရိုက်လိုက်ရအောင်နော်။
ဖွင့်တာသိပ်မကြာသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ ပုံစံသုံးမျိူးလောက်ကို ခံစားရပြီးပုံလှလှလေးတွေရိုက်ရင်း ဒီဆိုင်ရဲ့ Steakလေးတွေကို မြည်းစမ်းကြည့်ပါ။ ပုံစံသုံးမျိူးလို့ဆိုလိုတာကတော့ အထပ်သုံးထပ်ရှိပြီး မြေညီထပ်မှာ တကယ့် လမ်းမဘေးက ဘားလေးတစ်ခုလို ခံစားရစေမှာပါ။ ဒုတိယထပ်မှာတော့ တကယ့်အထက်တန်းလွှာခံစားမှုကို ရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်ဆုံးထပ်ကတော့ တကယ့်ကို ကလပ်ထဲကိုရောက်သွားသလိုခံစားရစေမှာပါ။ အဝတ်အစား စတိုင်အစုံလေးတောင် ထည့်သွားသင့်ပါတယ်။
1900 ခုနှစ်များမှာသာ သင်မွေးခဲ့ရင် ဒီနေရာမှာ သင်ပျော်နေမှာပါ။ ငယ်ဘဝကို အမှတ်ရစေမဲ့ အပြင်အဆင်တွေအပြင် ဒီဆိုင်မှာဖွင့်တဲ့ ဂီတတွေကသင့်ကို ငယ်ဘဝထဲကို အရောက်ဆွဲခေါ်မှာပါ။
စာရေးသူတစ်ဖက်သတ်အမြင်တွေဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါနော်။ ခုလို အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဖတ်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တာ့ Doemal Page မှာရော Website မှာပါ အမြဲစောင့်ကြည့် ဖတ်ရှုနိူင်ပါပြီဆိုတာလေးလဲ ပြောပါရစေ။